Ajụjụ - Baiyiju Smart Home Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
Beajom bụ nhọrọ ga-eme ihe dị iche na ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị, Anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na ịkwado Beajom ziri ezi ma zuo oke, anyị ga-achọ ịkọrọ ụfọdụ eziokwu dị mkpa na ozi banyere ihe kpatara ị ga - eji họrọ Beajom dị ka ogologo gị - soplaya soplaya:
Onye-nkwụsị ngwọta onye.
Anyị na-agba ọsọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma anyị abụghị naanị na emeputa, ihe karịrị afọ 12 na-arụsi ọrụ ike ma na-akọ ihe na ngwá ụlọ ụlọ ọrụ & afọ 8 na-eto n'ụlọ na akpaaka ebe, anyị miri ịghọta dum ụlọ ọrụ na ahịa, anyị na-anọdụ n'otu akụkụ nke table dị ka ndị ahịa anyị inye ihe ngwọta maka mkpa ha gbasara nsogbu azụmahịa. Gbalị irere gị ngwaahịa ndị ọzọ abụghị ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị mma, anyị na-ege gị ntị, ọchịchọ ịghọta nke ọma ihe ị na-atụ anya, lekwasịrị anya n'ihe ị na-ebute ụzọ ma nwee ike ịnye ngwọta dabara maka mkpa gị ọ bụla.
Ekwadoro Ogo njikwa.
Kwadoro site na usoro ISO9001 & ISO14001 management system.
Ndị nkuzi 5S zụrụ nke ọma.
Mgbe ụlọ ọrụ 4.0 mgbanwe, anyị àgwà akara ruru ọhụrụ ọkwa nke bụ pụtara ìhè na ahịa.
anyị na-emejuputa usoro ebe ejiri mepụta ngwaahịa dị mma na nlezianya ruo nkọwa kacha nta.
Mgbe mgbanwe nke ụlọ ọrụ 4.0, ikike anyị na-emepụta amụbaala okpukpu abụọ. Ma ọ bụghị njedebe ikike, ọ pụtara na anyị nwere ike ịnyefe nnyefe ka mma ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị ngwa, ọbụlagodi oge anyị na-enyefe oge dị ka ụbọchị 30 dị ezigbo mma nye ọtụtụ ndị ahịa.
Anyị ga-akụ ọnụahịa ọ bụla ịchọta, nyere gị aka inweta uru dị elu site na nzụta n'ụlọ ọrụ anyị.
Ngwunye ngwongwo zuru ụwa ọnụ.
Nhọrọ dịgasị iche iche bụ isi ike anyị.
Vietnamlọ ọrụ Vietnam anyị na-ewu ewu, ma ga-arụ ọrụ n'April, 2021.
Anyị osisi Taiwan maka mmiri matarasị akara na-arụ ọrụ nke ọma na ike-gbasaa n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Anyị dị njikere inye ndị ahịa anyị zuru ụwa ọnụ ka mma, iji nyere ha aka ịnagide ọnọdụ azụmaahịa mba ụwa dị mgbagwoju anya na ngwọta ụwa.
Mgbe niile oké ahịa ọrụ & mgbe niile oké ngwaahịa.
Anyị na-enyefe ọrụ nke ọma site na ijikọta ndị kachasị mma na teknụzụ kachasị mma. A zụrụ ndị anyị maka ụkpụrụ ụlọ ọrụ kachasị elu ma kwụọ ụgwọ maka ịnye ndị ahụ ụkpụrụ dị elu nye ahụmịhe nke ụlọ ọrụ anyị na ọzụzụ na-aga n'ihu na teknụzụ kachasị ọhụrụ, usoro kachasị mma nke usoro anyị niile ga-egosipụta na mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa.
Mgbe niile oké ahịa ọrụ & mgbe oké ngwaahịa, ọ bụ anyị nkwa, dị ka anyị na-aga n'ihu mma.
Anyị bụ ụlọ ọrụ ndị mmadụ.
Ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ igwe, akụrụngwa na usoro usoro ọgbara ọhụrụ, anyị agaghị adị na-enweghị ndị ọrụ anyị, ndị ahịa anyị na ndị na-eweta anyị.
Nwere ike ịdabere na anyị mgbe gị na Beajom na-arụ ọrụ, ikwere na na-enweghị ụkpụrụ azụmahịa na ụkpụrụ omume anyị, anyị agaghị enwe ike ijere ndị ahịa anyị ozi ogologo oge. Anyị nwere ike ịkpata ego, mana anyị agaghị enwe ike itolite ma ọ bụrụ otu a. Ọ bụ ya mere anyị ji asị ndị ahịa anyị ihe ndị a.
Tụkwasị ahụmahụ anyị.
Tụkwasị obi na ngwaahịa anyị.
Tụkwasịrị ụkpụrụ azụmahịa anyị obi.
anyị na-anwa ịgbalị ịbawanye uru nke ndị anyị na ndị ahịa anyị na mmepe nke usoro ọrụ Beajom.
Mgbe ị na-ahọrọ ndị na-ebunye bed ma ọ bụ ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ, onye ọ bụla na-azụ ahịa ga-enyocha ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. Anyị nwere olile anya na site n'okwu a, anyị nwere ike inyere gị aka ime mkpebi ziri ezi.
Biko kpọtụrụ anyị mgbe ọ bụla ị chọrọ!